Ogaden News Agency (ONA) – Qaxootigii Ugu Badnaa Abid oo Barakacay 2017-kii.
Qaxootigii Ugu Badnaa Abid oo Barakacay 2017-kii.
Posted by ONA Admin	/ June 20, 2018
Hay’adda qaxootiga u qaabisal Qaramada Midoobay (QM) ee loosoo gaabiyo UNHCR ayaa sheegtay in dadkii ugu badnaa abid oo gaaraya 68.5 milyan oo qof lagu qasbay inay guryahooda ka qaxaan sanadii tagtay, sababo la xidhiidha dagaallo, rabshado iyo dhibaateyn kale oo aad u saameeyaan bulshada rayidka ah.
Filippo Grandi, oo ka tirsan hay’adda UNHCR ayaa shalay saxaafada u sheegay magaalada Geneva in tirada qaxootiga dunida ee sanaddii 2017 ay saddex milyan ka badan tahay tii sanadii 2016. Waxa uu sheegay in ka badan 16 milyan oo qaxooti cusub ah la barakiciyey sanadii tagtay, sababo la xidhiidha dagaalo weli socda oo xal weli loo la’yahay dagaalada oo cadaadis ku haya dadka rayidka ah.
Mr. Grandi ayaa sheegay in saddex meelood laba meel dhammaan qaxootiga ay ka barakaceen dalal kooban oo ay ku jiraan Afghanistan, Suuriya, Koonfur Sudan iyo Jamhuuriyadda Dimoqraadiga ah ee Congo.
Waxa uu sheegay inay ogaadeen in 85% dhammaan qaxootiga dunida ay ka yimaadeen dalal sabool ama dhaqaale-dhexaad ah, taasi oo meesha ka saareysa sheekada ah in tani ay tahay “xasarad haysata dalalka hodanka ah”.